MAANHADAL: Madaxbanaanida Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Madaxbanaanida Soomaaliya (dhegayso)
Maajo 31, 2019 10:56 b 1
Kulanti wacan oo wanagaansan dhegaystayaal meel walbaad dunida ka joogtaan ku soo dhawadda Barnaamijka Maanhadal oo jimco walba an ku falanqeyno xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo hadba mowduuci taagan.
Barnaamijka Maanhadal Todobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa maanta aragtida ku aadan khariidadda Itoobiya ee lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya talaabooyinkii kalle ee xiga, iyo sidookale qorshaha Kenya ee dhulka Soomaaliya?
Hadaba ma muuqataa in ay qatar ku soo wajahan tahay madaxbanaanida Soomaaliya? maxayse ka dhigan tahay in iyadoo xaal halkaasi uu marayo ay sii kala fogaanayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa mamaul goboleedyada? su,aalahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa, waxaana marti ku ah darjirihii hore ee Qaramada midoobay ee Soomaaliya Ciidbadal Maxamed iyo Injineer Maxamuud Axmed Xasan Dhagawayne oo labaduba aad ufalanqeeya arimaha siyaasada ee geeska Afrika.
wariye Axmed Sheekh Maxamed Tallman ayaa soojeedinaya.
MAANHADAL 217 Wararka 19761
Abdallah Ahmed 12 months ago
asc dhaman bahda radio Daljir
waxan ani rumaysanahay in maanta wadanku khatar aad u wayna ku soo food leedahay. dhinac waliba waa lahurdaa hurdada halaga kaco